मर्यादाको चिन्ता- विविधा - कान्तिपुर समाचार
‘मर्यादामा आघात न्यायाधीशको निर्णयले पुगेको हो कि निर्णयबारे जनताको टीकाटिप्पणीले ?’
श्रावण १७, २०७७ शरच्चन्द्र वस्ती
लामो यात्राले लखतरान परेको रामजीवन माइक्रोबसबाट ओर्लनासाथ सीधै मामाघरतिर लम्कियो । कोरोनाको जगजगीबीच सप्तरीबाट काठमाडौं आउन त्यति सजिलो थिएन । तर लकडाउनका कारण चार महीनादेखि अड्किएको जग्गा–मुद्दाको चिन्ताले उसलाई घरमा बस्न दिएन । कथंकदाचित् त्यो मुद्दा बिग्रिएमा उसको घरबास उठ्ने थियो ।
रामजीवनलाई देखेर उसका मामा–माइजू भन्दा पनि १०२ वर्षे हजूरबा अर्थात् नानाजी दंग परे । ऊ मात्र त्यस्तो नाति थियो, जो घण्टौं उनका कुरा स्वाद मानेर सुनिरहन्थ्यो । राणाशासन देखे–भोगेका उनको स्मरणशक्ति यो उमेरमा पनि उम्दा थियो, त्यसवेलाका असंख्य घटना रिठ्ठो नबिराई वर्णन गर्थे । बोली उत्तिकै टडकारो थियो । कतै नलेखिएका, नसुनिएका, दन्त्यकथा जस्ता लाग्ने सत्यकथा सुन्न पाउँदा रामजीवन दंग पर्थ्यो । आजका जुनसुकै घटनालाई राणाकालमा लगेर दाँज्ने उनको बानी थियो । कोरोनाको कुरा चल्दा उनले भने, ‘महामारी त उसवेला पनि बरोबर आउँथ्यो र मान्छे सोत्तर हुन्थे, तर यसरी महीनौंसम्म आफ्नो घरमा कहिल्यै थुनिनु पर्दैनथ्यो ।’
भोलिपल्ट रामजीवनले सर्वोच्च अदालत पुगेर आफ्नो मुद्दाको खैखबर लिन खोज्यो । उसले ‘सप्तरीबाट आएको’ भन्नु के थियो, फाँटवालाले दुरदुर गर्‍यो, ‘लकडाउनभरि अदालतको शून्य समय हो भन्ने थाहा छैन ? अहिले सब काम बन्द छ । तपाईंहरू जस्ताको मुद्दा हेरिंदैन । कोरोना फैलिन सक्छ, तुरुन्तै फर्किहाल्नोस् । लकडाउन सकिएपछि आउनू ।’
फाँटवालाले सब काम बन्द छ भने पनि अदालत सुनसान थिएन । केही वकील ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए र झगडिया जस्ता नलाग्ने केही मानिस यताउति गुजुमुज्ज परेर कुरा गरिरहेका थिए । त्यहीं भेटियो रामजीवनले चिनेको एउटा पुरानो वकील । उसले भन्यो, ‘आज रमाइलो होला जस्तो छ, एकछिन बस्नोस् है ।’
नभन्दै एकै छिन पछि ‘जितियो, जितियो’ भन्दै केही मानिस दुई जना वकीलसँगै अदालतभित्रबाट निस्केर दुइटा गाडीमा सवार भए । वकीलले ‘ल आउनोस्’ भन्दै रामजीवनलाई आफ्नो मोटरसाइकलमा बसायो । गाडीको पछि लागेर उनीहरू एउटा जेलमा पुगे । अदालतको आदेश देखेपछि जेलरले राताराता आँखा र लामो कपाल भएको, गजक्क परेको एक जनालाई जेलको ढोकाबाट बाहिर निकालिदियो । ऊ आफ्ना वकीलहरूसँग हात मिलाएर ‘भरे आउनोस्’ है भन्दै एउटा गाडी हाँकेर हुइँकियो ।
वकीलले सुनायो, ‘त्यो मान्छेले चार दिन अघि एउटी आइमाईलाई बीच बजारमा त्यही गाडीले किचेर मारेको थियो । मानिसले ठाउँको ठाउँ पाता फर्काएर प्रहरीलाई बुझाएका थिए । हेर्नोस् त, आजै छुट्यो ।’
‘कसरी छुटेको नि ?’
‘जेलमा राख्ता उसलाई असजिलो हुन्छ, खानपान मिल्दैन, रहनसहन मिल्दैन, स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ भनेर रे ।’
‘यस्तो पनि हुन्छ ?’ रामजीवन स्तब्ध भयो, ‘अब सबै हत्यारा यसैगरी छुट्ने हुन् त ?’
‘सबै होइन, कोही कोही मात्र छुट्छन् ।
छुट्नलाई त माथिसम्म पहुँच हुनुपर्‍यो, भित्रभित्र धेरै हिसाबकिताब मिलाउन सक्नुपर्‍यो, त्यत्तिकै कहाँ हुन्छ र ?’ वकीलले कुरा बुझाउन खोज्यो, ‘अरूका लागि त अदालतमा सधैं शून्य समय नै छ नि । धाउँदै जाऊ, तारीख लिंदै जाऊ । के हतार छ ? बाबु मरे छोराले तारीख बोक्छ, के बिग्रन्छ ?’
कुरा नबुझेर अलमल्ल परेको रामजीवनलाई उसले भन्यो, ‘भोलि योभन्दा रमाइलो देखिनेवाला छ । दशै बजे आइपुग्नोस् है !’
बेलुका नानाजीलाई दिउसोको वृत्तान्त सुनाउँदा उनले भने, ‘हेर् नाति, उहिले उहिले पनि यस्तै हुन्थ्यो । जुद्धशमशेर महाराजकी एउटी भित्रेनी थिइन्, हात्ती चढेर शहर घुम्दा कुनै घरको झ्यालमा देखेपछि आठपहरिया लगाएर ल्याइएकी । नाम सपना थियो तर महाराजले स्वप्नपरी भन्थे । एक दिन तिनको टोल्याहा भाइले एउटी जनानालाई नरदेवी चोकमा दाउराको चिर्पटले हिर्काएर मारेछ र पक्राउ पर्‍यो । त्यसवेला स्वप्नपरीले भनिछन्— मर्ने मरिगई । अब मेरो भाइलाई जेल हाल्यो भने उसले दुःख पाउँछ । मासुभात खान नपाएर दुब्लाउला । चीसो ओछ्यानमा निद्रा नपरेर सिठ्ठो होला । अरू कैदीको पसीना गन्हाएर दमको रोगी होला । महाराजले निगाह गर्नुपर्‍यो । ...महाराज सारै दयालु थिए । उनले त्यसको सजाय माफ मात्र गरिदिएनन्, जागीर पनि दिए ।’
एक छिन अडिएर उनी मुसुक्क हाँसे, ‘हामीहरू त्यसलाई स्वप्नपरीको फैसला भन्थ्यौं । आज तैंले पनि स्वप्नपरीको फैसला देखिछस् ।’
रामजीवन भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालत पुग्दा चहलपहल झन् बढेजस्तो थियो । त्यस दिन झन् ठूलो स्वरले ‘जितियो जितियो’ भन्दै एउटा जत्था अदालतबाहिर निस्क्यो र गाडीको लश्कर लिएर अर्को जेलमा पुग्यो । जेलको ढोकैनिर चारघोडे बग्गी राखिएको थियो । बाक्लो मेकअपमा एउटी अधबैंसे महिला बग्गीछेउ उभिएकी थिइन् । एकै छिनमा जेलरले भय जन्माउने अनुहारको एउटा अधबैंसे कैदीलाई ससम्मान बाहिर ल्यायो र सलाम ठोक्यो । अदालतबाट गएकाहरूले ताली बजाउँदै उसलाई सयपत्रीका माला लगाइदिए र टाउको झुकाएर हात मिलाए । महिला ङिच्च गर्दै ऊसँग टाँसिइन् । संक्षिप्त ‘फोटो सेसन’ भयो र ऊ ती महिलासँगै बग्गी चढेर सबैलाई हात हल्लाउँदै विजयी मुद्रामा प्रस्थान गर्‍यो ।
वकीलले रामजीवनका कानमा साउती गर्‍यो, ‘यो मान्छे ठूलै ओहोदामा थियो । आफ्नी श्रीमतीलाई मारेर पेट्रोल खन्याई जलाए बापत जेल परेको थियो । आधा सजाय पनि नभोगी आज सरक्कै छुट्यो । त्यो आइमाई यसकी प्रेमिका हो । त्यसैका लागि श्रीमतीलाई मारेको रे ।’
‘यो चाहिं कसरी छुटेको त ?’
‘न्यायाधीशको चित्तले यसलाई जेलमा राख्ता यसमाथि अन्याय हुन्छ भन्यो रे ।’
‘जय होस् न्यायाधीशको चित्तको ! अब सबै हत्याराका दिन फिर्ने होलान्,’ रामजीवनको मुखबाट निस्कियो । आज भने वकीलले उसको प्रतिवाद गरेन ।
साँझ त्यो घटना सुनाएपछि नानाजी मुसुक्क हाँसे र आफ्नो पालाको इतिवृत्त सुनाउन थाले, ‘जुद्धशमशेर महाराजको एउटा हजूरिया झपटसिङले पनि एकपल्ट यस्तै गरेको थियो । रखौटी लिएर घरमै पुगेपछि स्वास्नीसँग झगडा पर्दा उसलाई घाँटी थिचेर मारिदिएछ । केही दिन जेल पनि पर्‍यो । तर ऊ महाराजको कौडा खेल्ने साथी थियो । कौडा खेल्न नपाएर निस्ताएपछि महाराजले उसलाई जेलबाट निकालेर फेरि हजूरिया बनाए । महाराज सारै दयालु थिए । उनको भनाइ थियो— रखौटी घरमा ल्यायो भन्दैमा लोग्नेसँग झगडा गर्नु स्वास्नीकै गल्ती हो । त्यही गल्तीले उसको ज्यान गएको हो । आफ्नो मृत्युको दोषी उही हो । त्यसबापत झपटसिङ जस्तो काविल मान्छेलाई सजाय दिंदा यसमाथि अन्याय हुन्छ । म न्यायमूर्ति हुँ । कसैमाथि पनि अन्याय गर्दिनँ ।’
रामजीवन ट्वाल्ल परेको देखेर नानाजीले थपे, ‘किन दिक्क मान्छस् नाति, उहिले जस्तो हुन्थ्यो, अहिले पनि त्यस्तै भएको त हो नि ।’
‘त्यसो भए राणाशासन र आजको दिनमा केही फरक छैन त ?’
‘कता के फरक देखिस्, तैं भन् न त ! राणाको भूतले पीछा गरेसम्म यस्तै हो । फैसला गर्ने न्यायाधीशको अनुहारमा ध्यान दिएर हेरिस् भने राणाको छाया छर्लंग देख्नेछस् । के बुझिस् ?’
रामजीवनको बोली हराएको थियो । नानाजीले भने, ‘त्यसपछि के भयो, त्यो पनि सुन् । के थाहा, आज पनि त्यस्तै भइजाओस् । ...झपटसिङलााई जेलबाट निकालेर फेरि हजूरिया बनाएको रैतीले मन पराएनन् । महाराजले न्यायको हत्या गरे भन्न थाले । क्रुद्ध भएर महाराजले केहीलाई ठिंगुरा ठोके । केहीको जिभ्रो थुते । तैपनि रैती चूप लागेनन् । महाराजको निन्दा बढ्दै गयो । अनि महाराजले इश्तिहार जारी गरे । त्यसमा भनिएको थियो :
‘प्यारा प्रजा गैह्रके यथोचित,‘हामीले गर्ने निर्णय ईश्वरको आदेश हो भन्ने तिमीहरू सबैले पितृपुर्खादेखि जानीबुझी आएकै छौ । त्यसलाई शिर झुकाएर स्वीकार गर्नु तिमीहरूको कर्तव्य हो । ईश्वरलाई साक्षी राखेर सबैले यो कर्तव्य पालन गर्नँ । अन्यथा गाथगादी ताकेको अपराधमा सजाय पाउनेछौ ।’
‘कस्तो तानाशाही !’ रामजीवनले भन्यो, ‘यी सब कुरा कहीं लेख्या पनि होला हगि ?’
‘खोज्दै गए इश्तिहारसम्म त भेटिएला, अरू थोक चाहिं कुन्नि,’ नानाजीले भने, ‘इतिहासका जम्मै कुरा कसले लेख्या हुन्छ र ?’
नानाजीको आशंका गलत थिएन । न्यायाधीशहरूका निर्णय जनताबीच तीव्र आलोचित हुँदै गए । चार दिन नबित्दै अदालतले वक्तव्य जारी गरेर भन्यो : हाम्रा निर्णयबारे गरिएका टीकाटिप्पणीले हाम्रो मर्यादामा आघात पुगेको छ । यसबाट हामी चिन्तित छौं । अदालत पवित्र संस्था हो । यसको मर्यादामा आघात नपुगोस् भन्नेतर्फ सचेत हुन सबैलाई अनुरोध गर्दछौं ।
वक्तव्य पढेर सुनाएपछि रामजीवनले भन्यो, ‘भाषा फरक, तर आशय चाहिं इश्तिहारकै जस्तो, हगि नानाजी ?’
नानाजीले भने, ‘यो सब छोड् नाति ! अब एउटा कुरा भन्— मर्यादामा आघात न्यायाधीशको निर्णयले पुगेको हो कि निर्णयबारे जनताको टीकाटिप्पणीले ?’
बिचरो रामजीवन, के भनोस् ? जवाफ नफुरेर अलमल्ल परेको छ । के तपाईं उसलाई सघाउन सक्नुहुन्छ ?
प्रकाशित : श्रावण १७, २०७७ १०:२१
भारतमा हरेक दिन संक्रमणको नयाँ कीर्तिमान
गएको दुई दिनमा थपिए एक लाखभन्दा बढी नयाँ संक्रमित, ३१ अगस्टसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द
श्रावण १७, २०७७ सुरेशराज न्यौपाने
नयाँदिल्ली — भारतमा बुधबारदेखि कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएको कडाइलाई थप खुकुलो पारियो । जसअनुसार जोखिममुक्त क्षेत्रमा रात्रिकालीन कर्फ्यु हटाउनेदेखि जिमखाना र योगा सेन्टरहरुलाई पनि खोल्न अनुमति दिइएको छ । भारतमा जुन पहिलो सातादेखि संक्रमण फैलिन नदिन लगाइएको लकडाउन र अन्य नियमहरुलाई खुकुलो पार्दै लगिएको छ । तर, कोरोना संक्रमण भने घट्नुका साटो दिनहुँ तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ ।
संक्रमणले हरेक दिन नयाँ कीर्तिमान बनाउन थालेको छ । भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार गएको दुई दिनमै एक लाखभन्दा बढी नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । शुक्रबारमात्र एकैदिन थप ५५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी संख्या हो । र, पचास हजारभन्दा बढी नयाँ संक्रमित थपिएको यो लगातार दोस्रो दिन हो । योसँगै भारतमा कुल संक्रमितको संख्याले सोह्र लाख नाघेको छ । साथै पछिल्लो एक दिनमा मात्र थप ७७९ जनाको मृत्यु भएको छ । योसमेत गरी भारतमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सख्या ३५ हजार ७४७ पुगेको छ । विश्वका कोरोना भाइरसले संक्रमित मुलुकहरुमध्ये भारत अमेरिका र ब्राजिलपछि तेस्रो स्थानमा छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुने संख्याका हिसाबले इटालीलाई समेत उछिन्दै पाँचौ स्थानमा पुगेको छ ।
भारतमा पहिलो संक्रमण ३० जनवरीमा केरलामा पुष्टि भएको थियो । तर, करिब ६ महिनाभित्रै संक्रमितको संख्याले १६ लाख नाघेको छ । भारतमा संक्रमित संख्या पहिलो एक लाख पुग्न साढे तीन महिना लागेकोमा थप पन्ध्र लाखका लागि तीन महिना पनि लागेन । समुदायमा फैलिएका कारण संक्रमण यसरी तीव्र गतिमा बढेको आशंका गरिएको छ । यद्यपि भारत सरकारले केही स्थानमा स्थानीय स्तरमा फैलिए पनि समुदायमै फैलिएको कुरालाई भने अझैसम्म पनि स्वीकार गरेको छैन । हालसम्म भएको मृत्युमध्ये आधाभन्दा बढी त यही जुलाई महिनामै भएको हो ।
विगत केही दिनयता महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेशलगायतका राज्यमा संक्रमणको फैलावट उच्च देखिएको छ । यी राज्यहरुमा नेपाली कामदारहरुको समेत बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । महाराष्ट्रमा मात्रै गएको चौबीस घन्टामा ११ हजारभन्दा बढी नयाँ संक्रमित पहिचान भएका छन् । र, त्यहाँ कुल संक्रमितको संख्या ४ लाख ११ हजार नाघेको छ । महाराष्ट्रमा त ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरु समेत संक्रमित भएका छन् । त्यहाँ नौ हजार दुई सयभन्दा बढी संक्रमित भएको बताइएको छ । त्यसैगरी दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडुमा पनि गएको एक दिनमा करिब ६ हजार संक्रमित बढेका छन् ।
यसअघि संक्रमण खासै नदेखिएका राज्यहरुमा पनि पछिल्लो समय संक्रमण तीव्र गतिले बढिरहेको छ । सिक्किममा कुल संक्रमितको संख्या ६१० नाघेको छ । संक्रमण बढेपछि राज्य सरकारले ३ अगस्टसम्मका लागि लडकडाउन लम्बाउने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसैगरी अर्को उत्तरपूर्वी राज्य असाममा पनि संक्रमितको संख्या बढेर ३८ हजार नाघेको छ । संक्रमण बढ्दै गएपछि आसाम राज्य सरकारले अझ दुई हप्ता संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको कडाइलाई खुकुलो नपार्ने बताएको छ ।
संक्रमणको जोखिम नहटेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई ३१ अगस्टसम्म स्थगित गरिएको छ । साथै कतिपय राज्यहरुले लकडाउनलाई क्रमश: थप्दै गएका छन् । तमिलनाडुले लकडाउनलाई ३१ अगस्टसम्म र बिहारले १५ अगष्टसम्म कायम राख्ने निर्णय गरिसकेका छन् । संक्रमण बढ्ने क्रमसँगै परीक्षणको दायरालाई भने फराकिलो बनाइएको छ । इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च(आईसीएमआर)का अनुसार हालसम्म एक करोड ८८ लाख ३२ हजारभन्दा बढीको कोरोना परीक्षण भएको छ । पछिल्लो समय परीक्षणको दायरालाई थप फराकिलो गर्दै लगिएको छ । बिहीबार मात्र ६ लाख ४२ हजारभन्दा बढीको परीक्षण गरिएको आईसीएमआरले उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी नेपालसँग सीमा जोडिएका उत्तरप्रदेश र बिहारमा पनि संक्रमणमा बढ्ने क्रममा छ । उत्तरप्रदेश (यूपी) गएको एक दिनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यूपीमा गएको एक दिनमा करिब साढे हजार जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै त्यहाँ कुल संक्रमितको संख्या पचासी हजार नाघेको छ । त्यसैगरी अर्को छिमेकी राज्य बिहारमा संक्रमितको संख्यामा विष्फोटक ढंगले बृद्धि देखिएको छ । गएको एक दिनमा मात्रै बिहारमा करिब तीन हजार नयाँ बिरामी थपिएका छन् । योसँगै त्यहाँ कुल संक्रमितको संख्या एक्काउन्न हजार पुगेको छ । भारतका अत्यधिक जनसंख्या भएका यूपी र बिहार स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिका हिसाबले अन्य राज्यहरुको तुलनामा निकै कमजोर मानिन्छन् । त्यसैले यी राज्यहरुमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जाँदा सीमा जोडिएका कारण त्यसको जोखिम नेपालमा पनि स्वत: बढेर जान्छ ।
महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटकलगायतका राज्यमा संक्रमण बढ्दै जाँदा ती राज्यहरुमा बाक्लो संख्यामा रहेका नेपालीहरु पनि संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ । भारतमा रोजगारी, अध्ययन र अन्य प्रयोजन गरी करिब बीस लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु रहेको अनुमान छ । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार हालसम्म ८९ नेपालीहरु संक्रमित भएका छन् भने १४ जनाको मृत्यु भएको छ । तर, भारतमा रहेका प्रवासी नेपाली संगठनहरुले भने संक्रमित र मृत्यु हुने नेपालीहरुको संख्या दूतावासले बताएभन्दा धेरै रहेको दाबी गरेका छन् ।
प्रकाशित : श्रावण १७, २०७७ १०:०४
‘कान्तिपुरले किन सबैलाई तिमी भन्छ ?’
कंक्रिटको कमल : ड्रिम प्रोजेक्ट
सलाम छ चार न्यायमूर्तिहरूको साहसलाई !
कोरोनाको नयाँ स्वरूप : चासो किन आवश्यक ?
अपडेटः सोमबार, १२ माघ, २०७७ । ०९ : १५ बजे
युवाहरू नेतृत्व लेऊ
केशव दाहाल माघ १२, २०७७
अबलाई खड्गप्रसाद ओली व्यक्तिको नाम रहेन । प्रवृत्तिको नाम भयो यो । यस्तो प्रवृत्ति जुन लोकतन्त्रको तेजोवध गर्न सम्पूर्ण शक्तिका साथ क्रियाशील छ । दुर्भाग्य भनौं, यो प्रवृत्ति...
संसारमा कीर्ति छ धेर ठूलो...
अर्जुननरसिंह केसी माघ १२, २०७७
सहिदलाई राष्ट्रको शक्ति–स्रोत, ईश्वरीय रूप तथा उनीहरूका संकल्प र सपनालाई बाँचेकाहरूका निम्ति उचित मार्गदर्शन मानिन्छ । सहिद दिवस वर्षमा एकपटक सम्झिने औपचारिकता र लोकाचार पुर्‍याउने श्रद्धारहित...
बलात्कार रोक्न सामाजिक अनुसन्धान
नमिता पौडेल माघ १२, २०७७
कोरोना महामारीमा अबोध बालिकाहरू बलात्कृत भएका समाचार आइरहे । बलात्कारीले आजीवन काराबासको सजाय पाए भन्ने समाचारचाहिँ त्यति पढ्न पाइएको छैन ।
‘देश पाल्ने’ हरूको दुःखान्त
सम्पादकीय माघ १२, २०७७
एक हिसाबले अहिले देशै ‘प्रवास हिँडेको’ जस्तै छ । पछिल्लो समय कोभिडका कारण दैनिक परदेसिनेको संख्यामा कमी आए पनि हरेक दोस्रो–तेस्रो घरको कोही न कोही रोजगारीकै...
अच्युत वाग्ले माघ ११, २०७७
नेपालको राजनीति फेरि एकपटक अकल्पनीय दुर्दान्तकारी युगमा प्रवेश गरेको छ । यो अनिष्टको सम्भावनालाई प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना वा मुलुक चुनावमा होमिने जुनसुकै निर्णयले पनि तात्त्विक फरक...
इजलास गठनमा बहस
बलराम केसी माघ ११, २०७७
संसद्को काम कानुन बनाउने र सरकार दिने हो । प्रतिनिधिसभा यी दुवै कामका लागि सक्षम थियो । अचानक प्रधानमन्त्रीबाट संसद् विघटन भयो । नेपालमा लिखित संविधान छ । लिखित...
फुटपरस्त दल र समाजवादको मृगतृष्णा
उषा थपलिया माघ ११, २०७७
२००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन हुँदा राणा शासनविरोधी आन्दोलनको माहोल बन्दै थियो । कांग्रेसले आन्दोलनलाई अघि बढाउने घनीभूत तयारी गरिरहँदा भारतको कलकत्तामा मुलुकको जेठो कम्युनिस्ट...
समयको भ्रष्टाचार !
सम्पादकीय माघ ११, २०७७
नेपालमा यसै पनि प्रशासनिक खर्च चुलिँदो छ, विकास गतिविधिका लागि पर्याप्त बजेट छैन । तर यो यथार्थलाई सधैं व्यंग्य गरिरहेको हुन्छ, पुँजीगत खर्चले । खासमा, मुलुक विकासका...
संकटले जन्माएको अवसर
आहुति माघ १०, २०७७
मुटु एउटै तर दुई रोगी शरीर भएका जुम्ल्याहाजस्तै नेकपा (नेकपा) आज यस्तो कम्युनिस्ट नामधारी पार्टी सक्रिय गतिविधिमा छ, जसको विश्लेषण र व्यवहार कम्युनिस्ट सिद्धान्त, आदर्श...
शरच्चन्द्र वस्ती माघ १०, २०७७
चिटिक्क परेको साइनबोर्डमा हरिया अक्षरले लेखिएको थियो— राष्ट्रिय मानव आरक्ष ।एउटा स्वचालित जीप विना आवाज सलल्ल आएर गेटछेउ रोकियो । तीनवटा ढोका खुले र तीनजना एकैचोटि ओर्लेर...